Soo dejisan AnyTrans 7.0.4 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: AnyTrans
AnyTrans – software ah kala iibsiga file laba-jid u dhexeeya aad PC iyo qalabka macruufka. software The awood u guurto photos, music, codsiyada, video, xiriirada, fariimaha, iwm AnyTrans kuu ogolaanayaa inaad si ay u maareeyaan xogta shakhsiga ah, files of qaabab kala duwan iyo bookmarks Safari. AnyTrans taageertaa shaqo gaar ah si ay u gudbiyaan dhammaan xogta ka mid qalab macruufka si kale loo eegin version nidaamka qalliinka. software waa awood si ay u abuuraan hayaan xogta iyo u arkaan ka kooban oo ka mid ah nuqulada jira ka iTunes ah. AnyTrans leeyahay interface a fudud oo dareen leh.
The kala iibsiga file dhakhso u dhexeeya qalabka macruufka iyo PC
Dhoofinta of content si ay iTunes
Management of xogta iyo faylasha shakhsiyeed
Shaqada cloning qalabka
Waxay abuurtaa oo u arka content ku hayaan
Soo dejisan AnyTrans
Faallo ku saabsan AnyTrans
AnyTrans Xirfadaha la xiriira
Si sahlan loo isticmaalo maamulaha file-ka ee qalabka Sony Software waxay taageertaa cusboonaysiinta codsiyada iyo nidaamka hawlgalka qalabka.